Hanjabaad bambo iyo qarax ka dhacay magaalada Malmö - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Erika Oldberg/TT
Hanjabaad bambo iyo qarax ka dhacay magaalada Malmö
La daabacay måndag 3 februari 2014 kl 10.51
Saaka sagaalkii subaxnimo ayaa shey laga shakisan yahay laga dhex helay dhismaha maxkamadda rafcaanka ee Mlmö. Boliiska ayaa dabadeed dadkii dhismaha ka saaray, gaadiidkana ka xiray waddooyinka ku hareereysan dhismahaas. Waxaa halkaask u soo wajahan farsama-yaqaanada bambooyinka ee boliiska. Baakadaas laga shakiyey waxaa laga dhex helay boosta maxkamadda markii la marinaayey sawirka raajada ah.
Hanjabaad bambo ayaa timid dhawr saac kadib markii habeenkii xalay saacaddu markii ay ahayd saddexdii saqda dambe uu qarax ka dhacay rugta laamaha sharciga ee magaalada Malmö. Cid wax ku noqotay qaraxaasna lama soo sheegin laakiin waxaa halkaask u burburay muraayadaha daaqadaha, gidaarada dhismayaashana waxaa soo gaarey dhaawacyo.
Rugtaan sharcigu waxay saldhig u tahay ciidanka boliiska, maamulka xeerilaaliyayaasha iyo hay’adda la dagaalanka dembiyada dhaqaalaha la xiriira.
Sida laga soo xigtey boliiska Skåne horay u ma jirin hanjabaad la ogsoonaa, laakiin ciidanka boliiska ayaa hawlgallo xooggan ku hayey kooxaha dembiilayaasha ah. Hawlgalladaasna waxaa loogu magacdaray mashruuca Olivia oo ah mid looga gol leeyahay in wax laga qabto dembiyada waaweyn oo habeysan iyo in la kordhiyo ammaanka magaalada.
" Hawlgalladaan aan ammaanka ku sugeynno waxaan tallaabooyin uga qaadeynnaa dembiyada ka dhaca magaalada, markaas waxaa laga yaabaa in ay dhacdadaani lug ku leedahay arrintaas ", ayuu Hans Nilsson oo sarkaal sare ka ah boliiska Skåne u sheegay idaacadda P4 Malmöhus.